Izindaba - Inkambiso yentengo yensimbi yaseChina ngoSepthemba 2020
1. Ukubuyekezwa Kwemakethe
Ngo-Agasti 2020, intengo yensimbi yasekhaya yehla kancane. Kusukela ngo-Agasti 30, inkomba yentengo yensimbi ivalwe ngo-3940, okuyinyuka engama-50 kusukela ekupheleni kwenyanga edlule.
Ngokukhethekile, ngo-Agasti, isimo sezulu esiqhubekayo samazinga okushisa aphakeme sasikhona ezweni lonke, ukwakhiwa komfula kanye nokukhiqizwa kwavinjelwa, futhi ukusebenza konke okwenziwe emakethe yensimbi kwakungavumi. Kodwa-ke, intshiseko yamabhizinisi ensimbi ekukhiqizeni iphezulu, futhi okukhipha insimbi kuhlala kuphezulu. Ngokwandiswa okuqhubekayo kokuphikisana phakathi kokuphakelwa kanye nokufunwayo, amasheya wensimbi yasekhaya aphinde angena esigabeni sokuqongelela. Imakethe yezimali ezinkulu yenze kahle kule nyanga. Ngokwenyuswa okuzayo ngekusasa lezimpahla ezimnyama, intengo yendawo yemikhiqizo yensimbi ivame ukukhuphuka kepha ingaze yehle. Ngasikhathi sinye, intengo yezinto zokusetshenziswa ibiqinile kakhulu kule nyanga. Ngemuva kokuthi intengo yezinto zokusetshenziswa emelwe yinsimbi ifinyelele kwirekhodi eliphezulu, ukugxila kwezindleko kuqhubekile nokuqhubekela phambili. , Izintengo zensimbi kuzwelonke zikhombise ukuthambekela kokunyuka esikhundleni sokuwa.
2. Ukuhlaziywa kokunikezela
1. Ukuhlaziywa kwesimo sempahla yensimbi yasekhaya
Ngokuya ngemininingwane yokuqapha impahla, kusukela ngo-Agasti 30, ingqikithi yezimpahla zasekhaya zemikhiqizo yensimbi enkulu yayingamathani ayizigidi eziyi-15.58, ukwehla kwamathani ayi-148,900 kusukela ekupheleni kukaJulayi, ukwehla ngo-0.95%, nokwenyuka kwamathani ayizigidi ezingama-3.0449, i ukwanda ngama-24.3%, kusuka esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Phakathi kwazo, amasheya wentambo, ucingo, okusongwe okushisayo, okusongwe okubandayo naphakathi nendawo kungamathani ayizigidi eziyi-8.7913, amathani ayizigidi eziyi-1.9336, amathani ayizigidi ezingama-2.6794, amathani ayizigidi eziyi-1.1083 namathani ayizigidi eziyi-1.0674 ngokulandelana. Ngaphandle kokuphinda kuqhubeke ukwanda, amasheya emikhiqizo emihlanu yensimbi yasekhaya kule nyanga konke kwehle ngamazinga ahlukahlukene.
Ngokuya ngokuhlaziywa kwedatha, ngemuva kwenkathi yemvula, ukusebenza kokuthengiselana eMpumalanga yeChina naseNingizimu yeChina kuthuthuke kancane, futhi ukubalwa kwezinto zokwakha kwehle kancane emasontweni amabili okuqala ka-Agasti. Kodwa-ke, izikhathi ezinhle azihlalanga isikhathi eside. Ngokufika kwesimo sezulu esishisayo, isidingo sokugcina saphinde savinjelwa. Emasontweni amabili alandelayo, izinga lokusungula layeka ukuwa laphinde laphindeka. Ngasikhathi sinye, ukukhishwa kwezigayo zensimbi kuhlala kuphezulu. Ngaphansi kwethonya lokuphikisana phakathi kokunikezwa nokufunwayo, inqubo yokugaywa kwempahla ayibushelelezi. Ngemuva kokungena ngoSepthemba, ngokwethulwa okugcwele komjikelezo wesibili wokuhlolwa kokuvikelwa kwemvelo nezemvelo, ingcindezi ohlangothini lokuphakelwa kwemakethe yensimbi ingahle yehliswe, nohlangothi lokufunwa luzophinda lubuye ngenxa yomphumela wesizini enkulu. Ngokuvuselelwa kwezindlela ezimbili kokuphakelwa kanye nokufunwayo Ngakho-ke, ukwehla kwensimbi yensimbi ngoSepthemba kuzoba umcimbi omkhulu wamathuba.
2. Ukuhlaziywa kwesimo samanje sokuhlinzekwa kwensimbi yasekhaya
Ngokwezibalo ezivela kuChina Iron and Steel Association, isilinganiso sensimbi eluhlaza nsuku zonke esikhishwa emabhizinisini ensimbi abalulekile maphakathi no-Agasti 2020 bekungamathani ayizigidi ezingama-2.16, ukukhuphuka kwamathani ayizigidi ezingama-0.76 kusuka ngenyanga edlule, ukwanda ngo-0.35%, kanye no ukwanda kwe-5.20% unyaka nonyaka.
Idatha ikhombisa ukuthi maphakathi no-Agasti 2020, izinkampani ezibalulekile zensimbi zezibalo zikhiqize inani eliphelele lamathani ayi-21,610,200 wensimbi ongahluziwe, amathani ayizigidi eziyi-19.063 wensimbi yengulube, amathani ensimbi angama-20,678,600, namathani ayi-coke ayizigidi ezingama-3.2138. Okujwayelekile okukhishwa nsuku zonke kuleli sonto bekungamathani ayizigidi ezingama-2.161 wensimbi engahluziwe, ukwanda ngo-0.35% inyanga nenyanga kanye no-5.20% unyaka nonyaka; insimbi yengulube yayingamathani ayi-1,906,300, ukwehla kwenyanga nenyanga okungu-0.56% nokukhuphuka konyaka nonyaka ngo-3.99%; insimbi engu-2.067 wezigidi zamathani, ukwanda kwenyanga nenyanga ngo-3.45% kanye nokwenyuka konyaka nonyaka ngo-6.15%.
Mayelana nokuhlinzekwa kwezimakethe zensimbi, izintengo zensimbi zisasesigabeni esinenzuzo esikhathini esifushane, futhi izigayo zensimbi mancane amathuba okuthi zithathe isinyathelo sokunciphisa kakhulu umkhiqizo, futhi ukuhanjiswa kwensimbi kuzohlala kuphezulu.
3. Ukuhlaziywa kwesimo sokungeniswa kwensimbi yasekhaya kanye nokuthekelisa
Ngokwezibalo ezivela kuGeneral Administration of Customs: NgoJulayi 2020, iChina yathumela ngaphandle amathani ayizigidi eziyi-4.176 ensimbi, okwenyuka ngamathani angama-475,000 kusuka enyangeni eyedlule, ukwanda ngo-12.8%; inani lokutholwa lokuthekelisa lalingu-US $ 3.64 billion. Ngokuya ngalesi sibalo, intengo emaphakathi yokuthunyelwa kwemikhiqizo yensimbi yaseChina ngoJulayi kwakungu-US $ 872.7 / ithani, ukwehla kwe-US $ 38.9 / ithani kusuka enyangeni eyedlule, noma ku-4.3%. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi, iChina yathumela kwamanye amazwe ingqikithi yamathani ayizinsimbi angama-32.880, ukwehla konyaka ngamathani ayizigidi eziyi-7.045, ukwehla ngo-17.6%; inani lokuthekelisa eliqoqayo lalingama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-26.397 zase-US, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-19.7%. Ngokuya ngalokhu kubalwa, intengo emaphakathi yokuthengiswa kwensimbi eChina kusuka ngoJanuwari kuya kuJulayi kwakungu-US $ 802.8 / ton.
Ukusebenza kwempahla ethunyelwa kwamanye amazwe ngoJulayi kudlule okulindelekile. Ngokusheshisa ukuqala kabusha komsebenzi naphesheya kwezilwandle, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kulindeleke ukuthi kuzinze ebangeni lokukhula okuhle. Kodwa-ke, isimo samanje somnotho wasekhaya nowamazwe omhlaba sisenzima kakhulu, kanti umnotho womhlaba usezinhlelweni zokulungisa ngokujulile. Ukubuyela emuva okuthekelwa ngaphandle ngoJulayi kusenzima ukuthola ukuthi kuyindawo yokwenzani. Ngokuqaliswa kancane kancane kochungechunge lwezinqubomgomo nezinyathelo zokukhuthaza ukukhula kokungeniswa nokuhwebelana kwamanye amazwe, ukuhwebelana kwangaphandle kwezwe lami kulindeleke ukuthi kugcine ukukhula okuzinzile kulo nyaka, kuyilapho kuqhutshekwa kwenziwa ngcono isakhiwo futhi kuthuthukiswe ikhwalithi nokusebenza kahle.
4. Ukuhlinzekwa kwensimbi okulindelekile ngenyanga ezayo
Ngo-Agasti, umkhiqizo wensimbi ongahluziwe wasekhaya uqhubeke nokuba phezulu, futhi umphumela wokuvinjelwa kokukhiqizwa kanye nokwehliswa komkhiqizo bekungalungile njengoba bekulindelwe. Ngokwethulwa komzuliswano wesibili wokuhlolwa kokuvikelwa kwemvelo nendawo, ingcindezi ohlangothini lokuphakelwa kwasekhaya ingancipha kancane ngoSepthemba. Kodwa-ke, okuqhutshwa yinzuzo, izigayo zensimbi zisakhuthazeka kakhulu ukukhiqiza, futhi ukukhiqizwa kwensimbi ngoSepthemba ngeke kwehle kakhulu. Ngakho-ke, silindele ukuthi ukunikezwa kwensimbi yasekhaya okuzowela ngoSepthemba kube nomkhawulo.